Gore remubhaibheri
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Gore remubhaibheri
Muchidzidzo chino tichaona kuti gore remuBhaibheri rine mazuva 360 (nemwedzi gumi nemiviri yemazuva makumi matatu pamwedzi mumwechete).
Tinofunga nezvegore riine mazuva 365 nekota. Asika, zvakagara zvakadai here? Mamwe marudzi nedzimwe nyika vanoshandisa mamwe makarenda akasiyana neratinogaroshandisa. MaJuda anoshandisa rinonzi Luna karenda, rine mwedzi unoiswa pamakore mashoma kugadzirisa zvinhu zvakare (sezvatinoita nemaripi ye). MaMosiremu ari kushandisa Luna Karenda rinoverenga mazuva kubva pazviitiko zvemuhupenyu hwa Mohamedi. Ngatitarisei nhoroondo yekarenda redu ranhasi uno.
Shanduko zhinji dzakaitwa kutosvika kunana 16 century AD. Bhaibheri raive ratonyorwa kare nguva iyi isati yasvika. Saka tinobvunza mubvunzo, “Bhaibheri rinoshandisa karenda rimwechete nesu here?” Mhinduro iri pachena ndeyekuti, “Zvingadaro chose kuti karenda reBhaibheri harina kufanana neratiri kushandisa nhasi uno.
Kuna Genesisi 7 na 8 tinoverenga,
Genesisi 7:11 Pagore ramazana matanhatu roupenyu hwaNoa, nomwedzi wechipiri, nezuva regumi namanomwe romwedzi, nezuva iroro matsime ose apakadzikadzika akadziurwa, namahwindo edenga akazarurwa.
12 Mvura zhinji ikanaya panyika namazuva ana makumi mana nousiku huna makumi mana.
24 Mvura ikaramba yakakwirira panyika mazuva ane zana namakumi mashanu.
Genesisi 8:3 Mvura ikaramba ichidzoka panyika, mazuva ane zana namakumi mashanu akati apfuura, mvura ikaderera.
4 Nomwedzi wechinomwe, nezuva regumi namanomwe romwedzi, areka ikamira pamusoro pamakomo eArarati.
Nguva dzekubva pazuva rechi 17 remwedzi wechipiri, kusvika pazuva rechi 17 remwedzi wechinomwe (inguva inoita mwedzi mishanu yakazara), mazuva 150. Izvi zvinoreva kuti mwedzi wemuBhaibheri une mazuva 30, uye gore remuBhaibheri rine mazuva 360.
(Batisisai kuti karenda remuBhaibheri rakasiyana nekarenda redu ratinoshandisa. Kunyangwe izvi zvichiita sekuti kubva musi wa 17 Kukadzi kusvika musi wa 17 Chikunguru (anova mazuva 150 zvakare), gore remuBhaibheri rinotanga pamazuva ari mumwedzi waKurume (panguva yekukohwa).)
Karenda rekuna Zvakazarurwa
karenda rechiporofita riri muBhaibheri rinoshanda nenzira imwechete.
Zvakazarurwa 11:1 Zvino ndakapihwa rutsanga rwakaita semudonzvo; mutumwa akati: Simuka, uyere tembere yaMwari, nearitari ,navanonamata mairi.
2 Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetembere, usaruyere nokuti rwakapiwa vahedheni; vachatsika guta dzvene mwedzi inamakumi mana nemiviri.
3 Ndichapa zvapupu zvangu zviviri simba kuti zviporofite, zvakapfeka masaga, mazuva ane churu chinamazana maviri namakumi matanhatu.
6 Vane simba rekuzarira denga kuti mvura irege kunaya namazuva okuporofita kwavo; vane simba pamusoro pemvura kuti vaishandure ive ropa, nokurova nyika namadambudziko ose nenguva dzose dzavanoda.
Mwedzi inamakumi mana nemiviri mazuva 1260. Izvi zvinoreva zvakare kuti mwedzi mumwechete une mazuva 30, uye gore rine mazuva 360. Mwari haashanduke.
(Kuti tiwane ruzivo rwekuti mumwechete wamaporofita aya aive ani handei kuna Jacobo 5:17. “Eria (herijah) aive munhu akaita sesu kupisa nechando aizvinzwa sezvatinoita, akanamata zvakadzama kuti kusanaye: kukasanaya panyika panguva inoita makore matatu nemwedzi mitanhatu.”
Makore matatu nehafu zvakafanana nemwedzi makumi mana nemiviri, nemazuva 1260.)
Chinhu chikuru ndechekuti hatikwanisi kushandisa karenda remaGiriki. Kuna Isaya tinoverenga kuti zvinhu zvese zvinofanira kuva maererano nemurairo uye zvipupuriro (Shoko raMwari).
Isaya 8:19 Zvino kana vachiti kwamuri, bvunzai masvikiro navavuki, vanorira nokuita zevezeve: Ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here?
20 Dzokerai kumurairo nokuzvipupuriro! Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani.
Tiri kurarama zvinotyisa kwazvo kana tichishandisa chimwe chinhu chisiri maGwaro kutsanangura maGwaro. Kunyangwe kusvika pachinzvimbo chekudyidzana nemasvikiro navavuki!
Ichi ndicho chimwe chikonzero nei tisingakwanisi kushandisa makore emaGiriki. Juriusi Caesari akazongoita kuti karenda remaGiriki rive rakagadzirisika zvakanaka munguva “yegore rekukanganisika” (46 BC), paakawedzera mazuva angangoite 80 kuitira kuti karenda rienderane nekutenderera kwenyika. Pamashure paizvozvo Augustus Caesari akaitawo shanduko dzaisanganisa mazuva mashomanana.
Pope Gregory wechi 13 ndiye akazopedzisa kugadzirisa karenda ratiri kushandisa nhasi uno muna 1582 AD. Akaita izvi nekudzora Lipi ye pakutanga kweSenturi yegayega. Zvakare mamwe mazuva akawedzerwa. Shanduko dzese idzi dzinoita kuti zvisave nyore kune chero munhu kuti ave neruzivo chairwo (i.e. rwemazuva) chero mazuva akashandiswa mune zvakaporofitwa. Zvakadaro tinokwanisa kushanda zvakanaka uye zvakajeka nenguva dzepagore dziri pedyo nazvo.
Danieri 7:23 Akati, Mhuka yechina uchava ushe hwechina panyika, uchasiyana noumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose, nokuupwanya nokuuputsanya.
24 Kana dziri nyanga dzine gumi, paushe uhwu pachamuka madzimambo ane gumi, asi umwezve achamuka shure kwavo; iye achasiyana navamwe vokutanga, achakunda madzimambo matatu.
25 Achataura mashoko okumhura Mwari wokumusorosoro, achaparadza vatsvene, uye achatsvaka mano okushandura nguva nemurairo; ivo vatsvene vachaiswa mumavoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva, nehafu yenguva.
Tichitarisa kuti ndiani akashandura nguva (karenda) tinokwanisawo kunongedza chisikwa chechina!MaRoma, kumashure kwavo, kereke yeRoman Catholic. Tingavimba “nechikara” here kuti chitiitire karenda tisati tashanda nezvakaporofitwa muBhaibheri? Kwete!
Kushandura chikamu chemakore emuBhaibheri kumaisa muchikamu chemakore edu kunoita kuti tipete na 365 (x) tobva tagovanisa (devide) na 365.24219879 (kureba kwakaita gore repakarenda redu rezuva).